Regulations | Central Bank of Myanmar
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘဏ်များ အားကောင်းခိုင်မာစေရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် တည်ငြိမ်မှုရှိရန်အတွက် ဘဏ်များလိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည့် အဓိကစည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုးသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Liquidity Ratio Requirement Regulation
In order to implement the Financial Institutions Law, the Central Bank of Myanmar issued the Liquidity Ratio Requirement Regulation on July 7, 2017.
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘဏ်များ အားကောင်းခိုင်မာစေရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် တည်ငြိမ်မှုရှိရန်အတွက် ဘဏ်များလိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည့် အဓိကစည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ပမာဏကြီးမားသောကြွေးမြီများ ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Large Exposures Regulation
In order to implement the Financial Institutions Law, the Central Bank of Myanmar issued the Large Exposures Regulation on July 7, 2017.
ရရန်ပိုင်ခွင့်များအမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လျာထားခြင်း ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘဏ်များ အားကောင်းခိုင်မာစေရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် တည်ငြိမ်မှုရှိရန်အတွက် ဘဏ်များလိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည့် အဓိကစည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ရရန်ပိုင်ခွင့်များအမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လျာထားခြင်း ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Asset Classification and Provisioning Regulations
In order to implement the Financial Institutions Law, the Central Bank of Myanmar issued the Asset Classification and Provisioning Regulations on July 7, 2017.
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘဏ်များ အားကောင်းခိုင်မာစေရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် တည်ငြိမ်မှုရှိရန်အတွက် ဘဏ်များလိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည့် အဓိကစည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအား မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Capital Adequacy Regulation (CAR)
In order to implement the Financial Institutions Law, the Central Bank of Myanmar issued the Capital Adequacy Regulation (CAR) on July 7, 2017.
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးရန်ပုံငွေစည်းမျဉ်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ၃-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဗဟိုဘဏ် ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ၃-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃/၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၃-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော စည်မျဉ်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂/၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော စည်မျဉ်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၃-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ချေးငွေသတင်းအချက်အလက်ဌာန ထူထောင်ခြင်းနှင့် ချေးငွေသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခံခြင်းစနစ်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၄ အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ချေးငွေသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံခြင်းစနစ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကို ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းရည်ပြည့်ဝစွာနှင့် ထိရောက်လုံခြုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Regulation on Mobile Financial Services (30th March, 2016)
In order to create an enabling regulatory environment for efficient and safe mobile financial services in Myanmar, the Central Bank of Myanmar issues the Regulation on Mobile Financial Services on March 30, 2016.
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းတည်ငြိမ်မှု ရရှိရန်နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းကို ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပုဒ်မ ၉၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းကို ၃၀-၇-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Regulations for Financial Institutions (28th May, 1992)
The Central Bank of Myanmar here by issues the following Regulations under the authority conferred by section 102 sub-section (b) of the Central Bank of Myanmar Law.
Remittance Business Regulations
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 26.12.2013 (Customer Dealing)
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 24.12.2013 (Spot Dealing)
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 24.12.2013 (Customer Dealing)
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 23.12.2013 (Spot Dealing)
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 23.12.2013 (Customer Dealing)
MMK per USD - Date: 17th January 2020
(WA market rate) 1,465.8
Interbank Market WA rate 1,466.2
Bank-customer Market WA rate 1,465.1
Central Bank Rate 10%pa